Ahoana ny fomba hanovana ny endrika InDesign ho modely Word amin'ny dingana 6 | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Tutorials
Rehefa mila mamolavola a mombamomba ny orinasa tokony ho mailo ianao fa izay ataonao dia ho ampiasaina. Midika izany fa: raha mamolavola taratasy A4 ianao dia tsy maintsy tadidinao fa tsy maintsy manoratra eo aminy ny client miaraka amin'ny endrika noforoninao.
Ary ahoana no hataon'ny mpanjifa? Ny zavatra lojika sy mahazatra indrindra dia ny tsy fampiasan'ny mpanjifanay programa fandaharana toy ny InDesign, koa adidintsika izany ampifanaraho ny volavolainay amin'ny programa isan'andro kokoa. Izany hoe, tsy maintsy mamadika ny volavolantsika ho modely Word isika rehetra izay afaka manova sy mameno miaraka amin'ny lahatsoratra mifanaraka amin'izany isaky ny fotoana.
Fampianarana: avadiho ho lasa modely Word ny volanao
Androany izahay no mitondra anao a tena fohy tutorial, tena tsotra ary tena ilaina. Amin'ny ankapobeny, tsy haintsika ny mamindra endrika amina Word mba hahafahana miasa. Ny mazàna ataon'ny ankamaroan'ny mpamorona izay tsy mahalala ny dingana lazaintsika eto dia ny manondrana tsotra izao ny fisie .indd ho toy ny sary (.jpeg) ary apetraho ao amin'ny Word toy ny hoe misy sary. Fa tsy ity no fomba fiasa marina, ary mety hitondra aretin'andoha maro amintsika (mihetsika ny maodelintsika, tsy hain'izy ireo ny mampiditra ny lahatsoratra sns).
Araho tsara ireo dingana voalaza etsy ambany, ary raha manana fanontaniana ianao dia ampiasao ny faritra misy ny fanehoan-kevitra amin'ity lahatsoratra ity! Amin'ity ohatra ity dia ahodinay ny firafitry ny litera A4 ho lasa modely Word.
Sokafy ny InDesign. Mba hanaovana ny endrika na ny firafitry ny litera mahazatra A4 habe dia hofidintsika ity habe ity ho an'ny fisie anay (File> Vaovao> Document). Ao amin'ny boaty fifampiresahana izay miseho, araka ny efa nolazainay, amin'ny haben'ny pejy dia mifidy ny safidy A4 izahay. Manova ny soatoavina tadiavinay (sisiny, tsanganana ...) ary tsindrio raha hanaiky.
Mandrosoa izao manao ny famolavolana azafady. Manome modely ny lahatsoratra izahay ary mampiditra sary toa ny fanaonay amin'ity programa ity. Vantany vao vita ny volavolainay, mankanesa any amin'ny File> Export ary tahirizo ny môdelinao amin'ny endrika .PDF
Alefaso toy ny rakitra .PDF ny rakitrao (rakitra> Export na File> Export)
Manaraka izany dia manana safidy roa isika. Raha manana ny programa Adobe Acrobat ianao dia araho ireto dingana manaraka ireto:
Manokatra ny rakitra .PDF ianao Adobe Acrobat ary mankany amin'ny File (File)> Save As (save as)> Microsoft Word (.doc na .docx)
Raha tsy manana dia afaka avadiho amin'ny Internet ny rakitrao (tsy mila fampidinana) mivantana miaraka amin'ny .PDF ho an'ny Word converter, na raha mila programa amin'ny solosainao ianao dia mahazoa izany TextExporter. Ny hataon'izy ireo dia mitovy amin'ny Acrobat, ahodino ny rakitra .PDF ho lasa endrika eken'ny Word. Ny tombony azo amin'ireto programa ireto dia ny ahitantsika ny lahatsoratra rehetra nosoratanay tao amin'ny InDesign ho azo ovaina, ka safidy tena mahaliana rehefa miresaka pejy maromaro ao amin'ny katalaogy isika, ohatra, izay ny lahatsoratra no voatery nosoloin'ny mpanjifa.
.PDF mankany amin'ny pejy mpanova ny teny. Ampidiro ny rakitrao ary safidio ny endrika tianao hampidinana azy (raha ny anay, Word)
Inona no hitranga? Hanova ny endritsika ny mpanova. Saingy tsy tokony hatahotra isika, satria azontsika ovaina amin'ny tenintsika ao amin'ny Teniny mihitsy io. Ka mankany amin'ity programa ity izahay ary manokatra ny rakitra template.rtf izay nomen'ny mpanova an-tserasera anay. Ho hitanay amin'ny tranokalanao ny zava-drehetra, afa-tsy ny karazany. Misafidy ny lahatsoratra izahay ary ampiharintsika ny typografia izay tadiavinay.
Sokafy ny rakitra azonao tamin'ny Microsoft Word, toy ny hoe tsy misy antontan-taratasy izany
Ny dingana manaraka? Tsara hatrany ny ampidirina toromarika Ho an'ny mpanjifanay. A (manorata eto) dia tsy mihoatra, na amin'ny faran'ny lahatsoratra diso dia asio a (soloina ny atiny ilainao ity lahatsoratra ity).
Rehefa sokafanao dia ho hitanao eo amin'ny tranokalanao sy ireo lahatsoratra azo ovaina rehetra ny volavolanao. Fifaliana!
Farany manana isika tahirizo ity rakitra ity ho modely ho an'ny Word. Ka mankany amin'ny File> Save As ary amin'ny Format izahay dia misafidy ny safidy Word 97-2044 Template. Mametraka anarana isika, misafidy izay hitahiry azy ... VONONY! Efa manana ny volavolanay ho modely azo ovaina amin'ny Word izahay.
Ary farany, tahirizo ho modely ho an'ny Word ny rakitra. Mahay!
Raha mbola tsy nandinika izay nitahirizanao ny maodelinao ianao, raha tsy izany dia ao amin'ny fizarana "Ny môdeliko" io
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Avadiho ny endrika InDesign ho modely Word amin'ny dingana 6
ElisaCS dia hoy izy:
misaotra tamin'ny fanampiana, izay no nilaiko ho fantatra;)
Valiny amin'i ElisaCS
Salama, tsara, mifona koa mihatra amin'ny Illustrator 2015, mitovy ve ny fomba fanao?… Miarahaba!
Tsy mandeha ity rafitra ity. Raha vantany vao mametraka sary famantarana vector ianao, na boaty roa ho an'ny lohahevitra, daty sns. Ny manokatra azy amin'ny teny dia adala, toa ratsy sy diso toerana daholo ny zava-drehetra.
Mamaly an'i alvaro